दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको नयाँ भेरियन्ट ओमीक्रोन नेपाल भित्रने जोखिम कति? :: कमला गुरुङ :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको नयाँ भेरियन्ट ओमीक्रोन नेपाल भित्रने जोखिम कति?
संक्रमण रोक्न के छ सरकारको तयारी?
कमला गुरुङ शनिबार, मंसिर ११, २०७८, १८:५५:००
काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको कोरोनाको भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ओमीक्रोन नेपाल भित्रने जोखिम रहेको जनाएको छ।
प्रत्यक्ष रुपमा नभएपनि अप्रत्यक्ष रुपमा कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमीक्रोन नेपाल भित्रने जोखिम रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नभएसम्म नयाँ भेरियन्ट भित्रने जोखिम सधैँ रहने उनले बताए।
उनले भने, ‘यो भाइरस व्यक्तिबाट सर्ने र मुभमेन्ट हुँदासम्म जोखिम सबै ठाउँमा हुन्छ। नयाँ भेरियन्ट आउने जोखिम छ। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड नभुलौ भनिएको कारण पनि यही हो।’
दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको उक्त नयाँ भेरियन्टको रोकथामका लागि पूर्वतयारी थालिएको उनले बताए। दक्षिण अफ्रिकाबाट नेपाल भित्रने व्यक्तिहरुलाई निगरानी राख्ने, क्वारेन्टाइन अनिवार्य गर्ने, परीक्षण गर्ने निर्णय भएको उनले बताए। आइतबार बस्ने कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीको बैठकले यस बारेमा थप छलफल र निर्णय गर्ने उनले जानकारी दिए।
‘संक्रमण देखिएको देशबाट आउनेलाई के गर्ने भन्ने कुरा पहिलाको आदेशमा पनि छ। देशको अवस्था हेरेर त्यहाँबाट हुने उडान लगायतका विषयमा सीसीएमसीमा आवश्यक पर्‍यो भने थप निर्णय हुन्छ’ उनले भने।
उनका अनुसार दक्षिण अफ्रिकामा नेपालबाट प्रत्यक्ष उडान नहुने भएकाले पनि प्रत्यक्ष रुपमा भने भेरियन्ट भित्रने जोखिम छैन। तर पनि सतर्क रहन अति आवश्यक भएको उनले बताए। हाल यो भेरियन्ट अन्य मुलुकमा बढी नसकेकाले भारत लगायत अन्य राष्ट्रले जस्तो तत्काल केही निर्णय गर्न हतार भने नभएको उनले बताए।
‘अहिले हाम्रो दक्षिण अफ्रिकामा प्रत्यक्ष उडान छैन। अरु देशमा बढी नसकेको तथ्यांक भएर भारत या अन्य देशले भर्खरै गरे जस्तो निर्णय गर्न हतार भएन।’ उनले भने, ‘भारतले उडान रोक्यो भने हामीलाई पनि फाइदा नै गर्छ। किनभने भारतमा नआएसम्म नेपालमा आउने संभावना कम हुन्छ।’
निगरानी गरिरहेको भन्दै उनले आवश्यक परे थप निर्णय गरिने उनले बताए। विश्व स्वास्थ्य संगठनले हालै मात्र दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्टलाई ओमीक्रोन नाम दिएको छ। यो भेरियन्टको म्युटेसन डेल्टाभन्दा खतरनाक हुन सक्ने भन्दै वैज्ञानिहरुले सचेत रहन आग्रह समेत गरेका छन्।